Ny Rain' ny Fiangonana na Rain' ny Eglizy na Aban' ny Eglizy dia ireo mpanoratra kristiana teo anelanelan'ny taonjato faha-2 sy faha-7 nanao fampianarana nanana ny fahefany izay mbola tanana hatramin'izao. Fepetra efatra no namaritan' ny Fiangonana ny mpanoratr'ireo taonjato ireo izay mendrika ny hahazo izany anaram-boninahitra izany:
Ny Ray apôstôlika dia ireo mpianatra sy mpandimby ny Apôstôly roa ambin'ny folo. Ireo mpanoratra literatiora kristiana tamin’ny fiteny grika sady maty maritiry ihany, ary ireo tena nalaza tamin'ny taonjato voalohany sy faha-2 no tondroina indrindra amin'ny hoe Ray apôstôlika. Ny soratr'izy ireo dia tsy nampidirina ho isan'ny boky ao amin'ny Baiboly nefa heverina fa fitohizan'ny soratr’ireo apôstôly mamorona ny kanonan’ny Testamenta Vaovao sady loharano saro-bidy amin'ny fahafantarana ny tantaran'ny fiangonana.
Ireto avy ireo Ray apôstôlika:
Ignatio avy any Antiôkia
Ireo rain'ny fiangonana nanoratra tamin'ny fiteny grika no atao hoe "Rain' ny fiangonana grika". Ireto ireo Rain' ny fiangonana grika, atao hoe Ray grika
Ny patrôlôjia kosa dia teny enti-manondro ny fitambaran'ny asa soratry ny Rain'ny Fiangonana, ary io teny io dia manondro koa ny fitambaran'ny asa soratra andalinana ireo asa soratra ireo. Avahana noho izany ny patrolojia latina sy ny patrolojia grika. Ny patristika dia misy karazana literatiora maro (fanaovana hevi-teny, toriteny, sns) izay miorina kokoa amin'ny Baiboly, "fahefana fara tampony" izay halalinina amin'ny heviny ara-bakiteny sy ara-tantara ary indrindra amin'ny heviny ara-panahy (alegorika).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rain%27_ny_Fiangonana&oldid=1001942"
Voaova farany tamin'ny 4 Martsa 2021 amin'ny 07:45 ity pejy ity.